निर्वाचनको विषयमा त्यति धेरै त थाहा छैन ।
सरकार, हामीलाई सुरक्षा चाहियो
अहिले देश निर्वाचनमय बनेको छ । केहीअघि मात्र ३२ जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अब भोलि ४५ जिल्लामा एकसाथ दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । मलाई निर्वाचनको विषयमा त्यति धेरै त थाहा छैन । तर, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र आफूभन्दा ठूलाबडाको बहस सुन्दा वा पढ्दा वेलावेलामा हुने यस्तो निर्वाचन हामी जनता र देशका लागि खुसीकै विषय रहेछ जस्तो लाग्छ । त्यसैले, भोलि हुने निर्वाचन सफल होस्, सबैलाई शुभकामना छ ।
सरकार, तिमीले हाम्रा अभिभावकलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौ भने कसरी मतदान गर्न पठाउने ?
तर, निर्वाचन सफल होस् भनेर शुभकामना दिँदै गर्दा मेरो कलिलो मस्तिष्कलाई भने एउटा चिन्ताले भित्रभित्रै खाइरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको प्रचार–प्रसार सुरु भएदेखि अहिलेसम्म देशका विभिन्न भागमा सयौँपटक बम पड्केका खरबहरू मैले पनि पढ्दै र सुन्दै आएकी छु।
त्यस्ता विस्फोटबाट कैयौँ घाइते हुनुभएको र एकजनाको ज्यानै गएको अत्यन्तै अप्रिय समाचार पनि सबैले पढेकै हुनुपर्छ । हुँदाहुँदा देशकै सबैभन्दा सुरक्षित मानिने राजधानीमै पनि बम पड्किन थालेका छन् ।
बम विस्फोटबाट विभिन्न दलका उम्मेदवार, प्रचारप्रसारमा खटिएका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण घाइते भइरहेका छन् । तैपनि, सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन । आखिर किन ? किन सरकारले हामी जनतालाई सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन ? किन उसले आफ्ना जनताहरू सुरक्षित भएको प्रत्याभूति दिन सक्दैन ? कि यो देशमा सरकार नै छैन ? सरकार भइदिएको भए त उसले यसरी आतंक फैलाउने कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि तिनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने होइन र ?
यस्ता विस्फोटबाट विभिन्न दलका उम्मेदवार, प्रचारप्रसारमा खटिएका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण घाइते भइरहेका छन् । तैपनि, सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन । आखिर किन ? किन सरकारले हामी जनतालाई सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन ? किन उसले आफ्ना जनताहरू सुरक्षित भएको प्रत्याभूति दिन सक्दैन ? कि यो देशमा सरकार नै छैन ? सरकार भइदिएको भए त उसले यसरी आतंक फैलाउने कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि तिनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने होइन र ?
भोलि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा मजस्तै लाखौँ कलिला बालबालिकाका बाबा, मामु र आफन्तहरू मत खसाल्न जाँदै हुनुहुन्छ । फेरि पनि सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यसरी नै मतदान केन्द्रहरूमा विस्फोट भयो भने हामीमध्ये कैयौँ बालबालिकाले टुहुराटुहुरी बन्न विवश हुनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । मलाई त यस्तो कल्पना मात्रले पनि भाउन्न छुटेर आउँछ ।
सरकार, तिमीले हाम्रा बाबा, मामु र आफन्तलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौ भने हामीले उहाँहरूलाई कसरी मतदान गर्न पठाउने ? मतदान गर्न गएका हाम्रा आफन्तको सुरक्षाको ग्यारेन्टी तिमी कसरी गर्न सक्छौ ? बिहान सारसौँदा गएका मतदातालाई मतदानपछि सुरक्षित फर्किने वातावरण मिलाउनु तिम्रै दायित्व हो । तर, अहिलेको तिम्रो कमजोर भूमिका देख्दा सीमित उम्मेदवारलाई त सुरक्षा दिन नसक्ने तिमीले आममतदातालाई सुरक्षा दिन्छौ भनेर हामी कसरी तिम्रो भर पर्ने ?
सरकार, तिमीले हाम्रा बाबा, मामु र आफन्तलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौ भने हामीले उहाँहरूलाई कसरी मतदान गर्न पठाउने ? मतदान गर्न गएका हाम्रा आफन्तको सुरक्षाको ग्यारेन्टी तिमी कसरी गर्न सक्छौ ?
केही गरी कुनै मतदातालाई केही भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर मजस्तै कलिला बालबालिकालाई नै पर्ने हो । त्यसैले सरकार अहिले हामीलाई तिमीबाट अरू केही चाहिएन, खालि हाम्रा बाबा, मामु र आफन्तजन अर्थात् तिम्रा मतदाताको सुरक्षा चाहियो । सक्छौ यसको ग्यारेन्टी गर्न ?
– यूथिका खनाल, कक्षा : ८
मोक्षदा स्कुल, कुमारीगाल, काठमाडौं